Isakhiwo owawulangazelela ukusithenga ekugcineni siyatholakala. Le North Nazimabad okwamanje iphakathi kwempahla yethu ephezulu. Ukunikezwa okufana nalokhu kuke kwaqabukela kutholakala eNyakatho Nazimabad - iBlock H. Inani lezinketho ezingama-233 Square Yards eNyakatho Nazimabad lingalinganiselwa, ngakho-ke shesha. Indlu enikezwayo ingalingana kahle nezidingo zakho. Yini engaba ngcono kakhulu kunempahla enentengo kuma-Rs 30,500,000. Futhi, inezici ongazithanda nakanjani! Ungaxhumana nathi manje ukuze wazi konke ngakho!